Macluumaadka Taranka Eeyaha Newfoundland - Taranka
Macluumaadka Taranka Eeyaha Newfoundland
Sidee buu yahay Newfoundland carruur?
Ma yihiin kuwo ilaaliya guriga iyo qoyska?
Jimicsi noocee ah ayey u baahan yihiin?
Ma hoos bay u dhacaan?
Dhibaatooyin caafimaad noocee ah ayaa gaar u ah nooca?
Ma waxay uun yihiin madow Saint Bernards?
Newfoundland waxay ku jirtaa kooxda eyda shaqeeya, waayo?
Maxaa Newfoundland sidoo kale loogu yeeraa Eyga Badbaadada Nolosha?
Muxuu Newfoundland u sameeyaa sida eey markab ah?
Shaqo noocee ah ayay qabatay Newfoundland?
Waa maxay Heerka Sare ee Sare ee Newfoundland?
Waa maxay naadiga waalidka AKC ee Newfoundland?
Muxuu dalbanayaa xubinnimada NCA?
Sidee dhaxalka midabku uga shaqeeyaa Newfoundlands?
Ka waran ku ciyaarista aqal-wadaagta cunugga?
Ka waran tababarka?
Newf wuxuu caan ku yahay debecsanaanta, ilaalintiisa, iyo jacaylka carruurta. Wuxuu u dulqaadanayaa dabeecadaha carruurta ee ka fog taas oo ka dhigaysa noocyada kale inay dhaqso u dhaqaaqaan ama ka fogaadaan.
Sababtaas awgeed, wuxuu ku habboon yahay inuu noqdo wehelka cunugga, laakiin qaan-gaarka waa inuu aqbalaa waajibaadka ka-ilaalinta Newfie xadgudubka cunugga. Maaha wax shil ah in Nana asal ahaan Peter Pan ahaa Newfoundland.
Dabeecadda xasilloonida ee Newfoundland waxaa lagu ogaadey in ay saameyn aad u wanaagsan ku yeelaneyso carruurta hyperactive in ay jirto daraasad caafimaad oo la sameeyey 1970s iyada oo la adeegsanayo Newfoundlands oo qayb ka ah daaweynta.
Haa, Newfoundland, sida noocyada kale ee waaweyn, waxay ka soo degaan qeyb ahaan Tibetan Mastiff. Eeyaha nooca Mastiff-ka ah ayaa ilaalinayay guriga iyo qalbiga muddo ka badan 2,600 sano oo taariikhi ah.
Newfie waa wax yar oo dib-u-dhigis ah xagga ilaalinteeda marka la barbar dhigo noocyada kale. Uma badna inuu soo bandhigo riwaayad ciil & cabaad, isagoo ku tiirsan halkii uu ku xirnaan lahaa cabirkiisa iyo feejignaantiisa uu ka walwalsan yahay inuu farriin ugu diro ku soo xadgudbaha aan la rabin.
Waa wax iska caadi ah in Newf uu jir ahaan istaagi doono qoyskiisa iyo shisheeyaha kasta. Ma hanjabayo mana cabaadi doono, kaliya wuxuu kusii negaanayaa boos tilmaamaya inuu kujiro waajibaad.
Kama waaban doono inuu wax qabto, si kastaba ha noqotee, haddii qoyskiisa jir ahaan loo hanjabo.
Newf wuxuu leeyahay sirdoon ku filan oo uu ku aqoonsado xaalad khatar ah. Waxaa jira xisaabaadyo badan oo dukumiinti ah oo ku saabsan dadka ay ka badbaadinayaan qoyska Newfoundland qiiqa gaaska, dabka, iyo khataraha kale.
Waxay caan ku yihiin dareenkooda badbaadinta nolosha waxayna leeyihiin boqolaal badbaado oo dukumiinti ah oo la diiwaangeliyey si loogu ammaano. Waxaa lagu yaqaanay inaysan u oggolaan dadka inay galaan qotada dheer ee barkadda dabaasha illaa ay ka qancaan inay si fiican u dabaalan karaan si ay ugu dhiiran karaan madaxooda.
Dadka carruurta leh iyo barkadaha barkadaha waxay ogaadaan in Newf-ka uu daawado carruurta ilbidhiqsi kasta oo ay biyaha ku jiraan.
Newfoundland koray uma baahna jimicsi weyn. Waxay noqon karaan baradhada sariirta si sahal ah laakiin waxay diyaar u yihiin oo awoodaan inay kugu weheliyaan hawlo aad u culus.
Newf marna looma oggolaan karo inuu buuran noqdo, maxaa yeelay tani waxay si aad ah u gaabin doontaa cimri dhererkiisa oo aad u gaaban. Jimicsi joogto ah (socod maalinle ah oo socod ku socda leedhka) waa u muhiim dadka waaweyn.
Inta lagu jiro sanadkooda koowaad, Newfoundlands waxay ka koraan qiyaastii rodol illaa boqol rodol. Waxay u baahan yihiin cunto badan si ay u taageeraan koritaanka degdegga ah. Markay qaangaaraan, si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin dheef-shiid kiimikaad aad u hooseeya, milkiilayaasha Newfie waxay ogaadeen in biilasha cunnadooda eey ay ka hooseeyaan kuwa saaxiibbada leh Sheybaarada ama Shepherds.
Ka badbadinta eeyaha yar yar ee 'Newf', rajada laga qabo inuu yeesho eey ka weyn, waxay sababi kartaa dhibaatooyin daran oo lafaha ah. Xusuusnow, caatow Newfoundland waa caafimaad qabta Newfoundland.
Haa, munaasabad Inta badan Newfies waxay hoos u dhacaan wax ka yar kan St. Bernard, tusaale ahaan, laakiin markay faraxsan yihiin ama kululaanayaan ayay hoos u ridayaan. Markay nasanayaan ee ay qaboobayaan wax yar bay hoos udhigi doonaan. Waxay u badan tahay, si kastaba ha noqotee, in markii Newfie ay madaxeeda saarto dhabtaada, waxaa lagaa tagi karaa laab qoyan.
Haa. Koodhka hoose waxaa la daadiyaa ugu yaraan sanadkiiba mar, oo loo yaqaan 'jaakad afuufa.' Qurxinta caruurtu aad ayey muhiim u tahay waqtigaan, maadaama jaakada dhintey ay qasab tahay in la nadiifiyo ama dermo ayaa soo bixi doona. Waa suurtagal in la cadeeyo timo farabadan oo umuuqda inay le'eg yihiin baaxadda eeyga la xardhay, laakiin tani maahan xaalad socota.
Qiyaastii toban daqiiqo maalintii cadayashada (wax yar oo dheeraad ah inta lagu jiro usbuucyada yar ee daadinta sanadkiiba) ayaa ka ilaalin doona jaakad dhalaalaysa & caafimaad qabta. Ciddiyaha waa in lagu hayaa dherer gaaban si looga ilaaliyo cagaha inay isdhaafaan. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay nooc weyn, maadaama cagaha ay taageerayaan culeys weyn.
Inta badan Newfoundland badankood waxay daadiyeen LOT guga, ka dibna mar kale Deyrtii. Daadinta Dayrta badanaa way ka daran tahay xilligii Guga.
Newfies waa nooc muddo gaaban ah, oo leh badbaado sannadka 8-10 qiyaastii celcelis ahaan.
Hip dysplasia waa dhibaato ka jirta taranka waxayna curyaaminkartaa eey baaxaddiisa le'eg. Waxaa si fiican lagugula talinayaa inaad ka soo iibsato eey kaliya OFA (Aasaaska loo yaqaan 'Ortopedic Foundation for Animals') waalidnimada la aqoonsan yahay ama eeyaha haysta shahaado raajo oo u dhiganta laabatooyinkooda (miskaha iyo xusullada labaduba waa fikrad wanaagsan).
Dhibaatooyinka wadnaha sidoo kale way dhacaan. Newfoundlands waxay leedahay astaamo hidde ah oo loogu talagalay cudur wadne oo la iska dhaxlo oo loo yaqaan 'stenosis sub-aortic stenosis' (SAS). Cudurkan wuxuu sababi karaa geeri deg deg ah oo ah Newfoundland.
Kalkaaliyeyaasha mas'uulka ka ah waxay baaraan eeyahooda SAS markay yihiin 8-12 wiig markay gaaraan dhakhtarka wadnaha oo dhagaysta wadnaha eey. Dhammaan dadka waaweyn ee 'Newfs' waa in laga soo celiyaa SAS kahor taranka.
Daryeelka Hordhaca ah
Caadi ahaan, Newfies, sida eeyaha oo dhan, waa in si habboon loo tallaalaa (eeg Su'aalaha Badanaa La Weydiiyo). Xusuusnow in taxanaha taxanaha ah oo dhan ay tahay in la helay kahor intaadan ubadkaga u kashifin eey kale ama xitaa dhul kasta oo eey aan la talaalin laga yaabo inuu ku socday, maaddaama wax ku oolnimada hal-abuurnimada ay horjoogsatay xasaanadda ay hooyadu siisay mid ama dhammaan talaalada la bixiyay horaantii taxanaha.
Sida kaliya ee aad ku ogaan karto in ardayga la ilaaliyo waa marka isaga / iyada ay helaan tallaalka ugu dambeeya ee taxanaha.
Maya, Newfoundland waa nooc gaar ah, laakiin dad badan ayaa isbarbar dhigaya Saint Bernard iyo dhamaan Pyrenees-ka cadcad. Newfoundlands dhab ahaan waxay ku yimaadaan adag Madoow, Naxdin adag, Gray adag, iyo Madoow & Caddaan (eeg heerka).
Madaxa Newfie waa xoogaa laba jibbaaran oo xoogaa xoogaa ah 'istaag' ah iyo muuska qoto dheer oo ka badan Pyr, laakiin ka yar 'joogsi' iyo muuska ciqaabta leh ee Saint.
Inkasta oo labada nooc ee kale ay isku mid yihiin awoowayaasha, Pyr wuxuu leeyahay dareen xoolaad badan, Saint-na waxay ka badan tahay eyda badbaadinta dhul qalalan marka loo eego Newf. Newf waa kan ku fiican badbaadinta biyaha waana mid ka yara jilicsan dabeecad ahaan labada kale.
Xaqiiqdii, Newfoundland waxaa loo caleemo saaray Saint Bernard bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad iyada oo ujeedadu tahay hagaajinta jaakadda iyo awoodda shaqo ee Saint. Saint-timo dhaadheer waa shey ka mid ah faleebada dhiigga Newfie, maaddaama dhammaan Saint Bernards ka hor wakhtigaas ay leeyihiin timo gaaban.
Tijaabada ayaa la joojiyay markii jaakadaha dhaadheer la ogaaday inay si dhakhso leh u uruursadaan baraf, laakiin noocyada jaakadaha ayaa wali ku sii jira Saint Saint ilaa maanta.
Newfoundland waa eey u adeegay nin meelo badan oo awood badan ah. Wuxuu ku fiicanyahay sida wehel, ilaaliye, ilaaliye, badbaadiye, eey markab, xayawaan qabyo ah, xamuul wadayaal, dib u habeyn dabiici ah iyo eey adeec ah.
Marka lagu daro taranka iyo adeecida, milkiileyaal badan oo Newfie ah ayaa la tartamaya eeyahooda tijaabooyinka biyaha, culeyska jiida, gawaarida, travois iyo dhacdooyinka boorsada.
Si la mid ah u janjeedhka Saint Bernard ee samatabbixinta dadka barafka, Newfoundland waxay caan ku tahay badbaadinteeda tirada badan ee dabbaasha. 1800-yadii laba ey ee Newfoundland ah ayaa looga baahnaa qeyb ka mid ah qalabka nafaha lagu badbaadiyo mid kasta oo ka mid ah xarumaha badbaadada nafta ee ku xeeran xeebta England.
Haysashada dareen samatabbixin biyo ah, eeyga Newfoundland ayaa si muuqata jidh ahaan ugu habboon dabaasha, cagaha webbedkiisa, dabo adag oo u eg roodhida, jaakad laba-adkaysi u leh biyaha, iyo dhismihiisa xoogga leh, xooggiisa, iyo istaadhkiisa.
Markuu dabbaalgu dhibaato ku jiro laakiin uu miyir qabo, Newf wuxuu u dabaalan doonaa meel ka baxsan qofka, ka dib wuxuu ku dabaalan doonaa meel u dhow jihada xeebta (ama dhamaadka gacmeed ee barkadda dabaasha), wuxuuna qofka u oggolaanayaa inuu qabsado qayb kasta oo ka mid ah jirkiisa si uu u jiido dabbaasha si uu ugu ag jiido garaac xoog leh oo dabaasha ah.
Kaliya qof dabaasha oo miyir daboolin ayaa Newf ku qabsan doonta dabaasha afkiisa, isagoo si joogto ah u qaadanaya gacanta kore ee daamanka si uu u jiido badbaadada. Qabashadan gaarka ahi waxay keentaa in qofka dhabarkiisa loo rogo iyadoo madaxa laga soo saarayo biyaha.
Marka labo ka mid ah Newfies ay shaqeynayaan samatabbixin ayay si dabiici ah mid waliba u qaadan doonaa cudud kale.
Sawir gacmeed xilligii Fiktooriya oo cinwaankiisu ahaa 'Saved', oo uu qoray Sir Edwin Landseer 1856, iyo sawir la mid ah 'Waa la Badbaadiyey' oo ay sameeyeen Currier iyo Ives oo muujinaya Madow & Caddaan Newfoundland ah (noocyada madow iyo caddaanka ayaa markii dambe loo yaqaanay kala duwanaanta Landseer) ) xeeb leh wiil yar oo eyga uun ka badbaadiyey inuu maansheeyo, oo nooleeyo sifadan Newfie.
Newfoundland waxaa si ballaadhan loogu soo bandhigay farshaxanka xilligii Fiktooriya, Landseer ayaa ku sawiray sawirro iyo sawirro badan, iyo sidoo kale farshaxanno kale. Sawir gacmeed dambe oo uu sameeyay Pierre Auguste Renoir sanadkii 1878 ayaa muujinaya Newfoundland.
Sida laga soo xigtay Tani waa Newfoundland , waxaa qoray Mrs. Maynard K. Drury:
“Shaqada waxtarka leh ee Newfoundland ee uu u leeyahay nin badaha ayaa si caalami ah loo aqoonsaday xilligii markabka shiraaca in warbixinada shirkadaha ay ka yimaadaan dalal badan oo ka tirsan labada dhinac ee Badweynta Atlantik iyo sidoo kale Badda Dhexe.
Awoodiisa dabbaasha ee xoogga leh oo ay weheliso awooddiisa iyo sirdoonnimadiisu waxay hanti weyn u ahayd shirkad kasta oo markab laga leeyahay, waxaana caado noqotay in la qaato ugu yaraan hal web cag-cagaf ah oo Newfoundland u socdaalaya sidii 'eey markab'. Adeegga gaarka ah ee uu qabtay wuxuu ahaa inuu ku dabbaasho xeebta khadadka, sidaasna lagu abuurayo isgaarsiin caawimaad dhulka ah.
Tiro dad ah oo aan tiro lahayn ayaa la badbaadiyey sababtoo ah caawimaadda dabaasha ee 'markabka eyga' iyo awoodiisa uu ku heli karo inuu ku dul istaago dhagaxyada xunxun ee ku jira badda culus halkaas oo kuwa ugu fiican ee biyo-doonka ahi aysan badbaadi karin. Biyo aan sidaa u sii buurnayn ayuu sidoo kale ku raaci karaa doon yar xeebteeda oo uu rinjiile ka yahay.
'Holland, France, Italy, England, iyo Mareykanka waa diiwaanka ugu horeeya ee Newfoundland doorkiisa eey markab.'
Eeyga markabka Newfoundland ayaa door ka ciyaaray dagaalkii Trafallgar sanadkii 1805. Newf ayaa saarnaa markabka Titanic waqtiga uu quusayay. Eey kale oo markab Newfoundland ah ayaa qoolley ka soo degay sagxadda doonta goor mugdi ah wuxuuna soo badbaadiyey Napoleon Bonaparte markii uu ku dhacay biyaha oo ay heli waayeen shaqaalihii markabka markii uu ku laabanayey dalka Faransiiska isagoo ka yimid Elba.
Mid ka mid ah Newfie, Tang, ayaa loo tiriyay inuu badbaadiyay markab dhan oo dad ka buuxay sanadkii 1919 waxaana Lloyds oo reer London ah la siiyay biladdii adeegga Metitorious Service.
Newfoundland waxay u shaqaysay sidii eey qabyo ah England iyo Yurub. Buugga Tani waa Newfoundland waxaa qoray Mrs. Maynard K. Drury:
Horaantii 1824 waxaa lagu qiyaasey inay jiraan 2,000 eeyo Newfoundland ah oo ku sugan magaalada St. Johns isla markaana ay si joogto ah u shaqeeyaan. Waxay alwaax ka jareen kaymaha shidaal ahaan iyo ujeeddooyin dhisme, waxay kalluun ka soo jiiteen xeebta waxayna ka caawiyeen inay jiidaan shabagyada culus, waxayna ka rareen noocyada kala duwan ee badeecadaha meel ka mid ah magaalada ilaa meel kale iyo sidoo kale inay caano keenaan.
Waxaa lagu qiyaasay in hal bil oo sanadka ah 1815 eeyahaani ay magaalada St. Johns siiyeen foosha qiimihiisu yahay $ 4,500 ilaa $ 5,000 maalintii iyo in eey kaligiis ah, shaqadiisa, ku taageeri doono milkiilihiisa inta lagu jiro xilliga qaboobaha oo dhan.
Waxaa loo adeegsaday si keli ah iyo kooxo. Seddex ilaa shan eeyo ah oo looxidho fiiq ama gaari kale oo ay kujiraan rar xaabo, alwaax, ama kalluun (280 ilaa 450 rodol) ayaa si isdaba joog ah u sawiri doona.
Tani waxay sameyn lahaayeen kaaliyaha darawalka haddii ay ogaadaan wadada, oo markay rartaan ka dib culeyskooda, waxay ku laaban doonaan guriga sayidkooda abaalmarin kalluun qalalan, cuntadooda daruuriga ah. Marka laga soo tago shaqooyinkooda soo jiidashada yar, eeyaha waxaa sidoo kale loo adeegsaday inay ka soo daabulaan waraaqihiisa sareeye ee waqooyiga tareenka ilaa isgoysyada tareenka iyo hal fariisin ilaa mid kale iyadoo loo marayo silsilado degsiimooyin ah.
Kooxo celcelis ahaan celcelis ahaan toddobo ah ayaa jiifay sagxadahaas dhoobada barafoobay, iyada oo loo marayo kaymo dhaadheer, iyo waddooyin aan macquul ahayn xitaa faras adag. Howshan loo qabtay Boqorka eyga Newfoundland waxaa lagu sharfay in madaxiisa laga dhigo shayga boostada loogu diro dalkiisa hooyo. ”
Awooddan shaqo waxay si weyn u adeegsadeen xoogaggii xulufada ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka halkaas oo Newfoundland iyo Pyrenees Weyn ay sahay iyo saanadba ugu wateen Alaska iyo Aleutian Islands, xitaa iyada oo loo marayo dabeylaha.
Boorsooyinka maanta waxay kahelaan Newf wehel diyaar ah oo karti leh. Waxa kaliya ee ay tahay inaysan qaadin waa bacaha jiifka, maxaa yeelay jacaylka ay u qabaan biyaha wuxuu u rogi karaa isgoyska durdurka fiidkii qabow iyo qoyan.
Jaangooyuhu waa 'naqshad' jireed oo ah nooca. Waxay sharraxaysaa muuqaalka muuqaalka jirka iyo sifooyinka kale ee la doonayo ee taranka haddii kale loo yaqaan nooca . Astaamaha qaarkood, sida cabirka, tayada jaakada, iyo dhaqdhaqaaqa, waxay ku saleysan yihiin asalka (ama hadda) waxqabadka eyga.
Sifooyinka kale waa kuwo is qurxin badan sida midabka indhaha, laakiin marka la isku daro waxay ka dhigayaan noocyadan kuwo kale. The Standard wuxuu sharxayaa an fiican wakiilka nooca. Ma jiro eey shaqsi ah oo kaamil ah, laakiin Jaangooyada ayaa siineysa mid ku habboon ugaarsadayaasha inay ku dadaalaan.
Sababtoo ah welwelka xuquuqda lahaanshaha ee ku saabsan ururinta dhammaan heerarka goob kasta oo lagu keydiyo dhammaan su'aalaha, heerarka AKC caadi ahaan laguma darin su'aalaha noocyada ah. Akhristaha waxaa loo gudbiyaa daabacaadaha dhamaadka dukumiintigan ama Naadiga Taranka Qaranka si loo helo nuqul Heerka ah.
The Naadiga Newfoundland ee Mareykanka .
Codsiga xubinnimada waxaa ku jira meelaha banaan:
Hubi faahfaahinta xubinnimada halkan .
The Solid Black ayaa xukuma, ama BB. Landseer-ku wuxuu u nugul yahay madowga adag, ama bb, waana natiijada hiddo-wadaha pebald-ka, oo midab-iska-dhigga u saaraya asalka cad.
Solid Gronse waa ku noqoshada madow, iyo Solid Gray waa midab madow. Waa in taxaddar la muujiyaa marka eyda la midoobaan hiddo-wadaha jimicsiga, maxaa yeelay hiddo-wadaha 'pebald' wuxuu keenayaa midab adag iyo eey cadaan ah. Meesha midabka adag uu madow yahay, natiijada Landseer, oo ah midab jaangooyuhu oggol yahay.
Si kastaba ha noqotee, haddii eeyaha leh asalka Brown ama Grey ay ku dhasheen Landseer, natiijooyinka suurtagalka ah waa Naxaas iyo Caddaan ama Eey Cawl iyo Caddaan, oo labaduba si cad ugu qalma heerka. (Xusuusnow in midabka 'adag' loo tixgeliyo heerka in lagu daro qaar cad.)
HA KU CIYAARIN GURIGA adiga iyo ilmahaaga. Waa wax duufsan, waxay aad ugu egyihiin orso yar yar & way 'qaadan karaan' runtiina way ku raaxaysan karaan. The DHIBAATADA BADAN taasi waa in Newfie uusan wax fikrad ah ka haysan cabirkiisa ama inuu sii weynaanayo.
In kasta oo ay runti tahay wax qurux badan in yar yar oo aad leedahay ay lagdankaaga galaan, hareerahaaga oo ku tuur burooyinka jirka 25-30 rodol, maahan wax xiiso leh 10-ka sano ee soo socota 150 rodol! U daawee eeyaha yar yar ee loo yaqaan 'Newfie puppy' sida ay u tahay gabal naadir ah oo ah dhoobada ama muraayadda, runtii waa hanti aad u qaali ah.
Hubso inaad saxiixdo oo aad kaqeybqaadato fasalada adeecida. Newf-kaaga ayaa ka faa'iideysan doona xanaanada cunugga, sidoo kale. Ha ka sugin isaga (iyadu) inuu yeesho feejignaan ku saabsan fasalada dadka waaweyn wax badan ka hor 6 bilood. Xaqiiqdii tababbar isaga, si kastaba ha noqotee, kahor sanadka ka hor.
Waxaad ubaahantahay inaad ogaato sidaad ugula socodsiiso waxyaabaha aad rabto isla markaana isagu waa a EEY SHAQAYNAYA & wuxuu noolaan doonaa markuu noolaa inuu kaa farxiyo adiga oo dhaqmaya.
Way adkaan kartaa in la helo astaamaha ugu sarreeya ee tijaabooyinka addeecidda, haddii aad doorato inaad u tagto CD-ga, CDX, iwm, maxaa yeelay Newfies ma aha sida 'snappy' marka la xusuusto sida eeyaha yar yar, laakiin si fiican ayay wax u qabtaan oo run ahaantii sameeyaan ku raaxayso
U hubso inaad dhex dhexaadiso howlaha kale ee Newfies ay si gaar ah ugu habboon yihiin oo ay ugu raaxaystaan: U kori gawaarida si uu ugu soo jiido carruurta (hubi inaad haysato xoogaa qalab adag si gaadhigu aanu ugu ordi karin cidhibtiisa) - BIG ayaa lala dhacay carruurta.
Ha ku kharibaan khayaanada nooca Hindiya ah & ‘samatabbixi’ saaxiibadood. U samayso boorsada dhabarka oo ku dar dhammaan socodkaaga (kaliya ha u oggolaan inuu qaado boorsooyinkaaga jiifka, haddii aad lugaynayso meel u dhow biyaha WAY qoyaan doonaan.).
Wadooyinka biyuhu waa baashaal weyn & muuji awoodaada badbaadinta nolosha ee Newf.
Haddii aad jeceshahay noocyada waaweyn ama eeyaha nooca Mastiff, waxaad ku raaxeysan laheyd maqaalkeenna ku saabsan:
Bully Kutta (AKA Pakistani Mastiff)
Raadinta Abuure Mas'uul ah: 7 Tilmaamood oo ku Saabsan Iibsiga Ey
Adhijir Jarmal ah oo Yaryar: Eydan jeebka cabbirkoodu ma jiraan?
samayn maltese shih tzus daadi
dib u soo celinta dahabiga ah iyo adhijirka jarmalka isku darka
magacyada Irish ee eyda gabdhaha
intee in le'eg ayay chorkies nool yihiin